ओलीलाई कांग्रेसको अपील- डा. केसीको जीवन रक्षा गर - Media Dabali
काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसले डा. गोविन्द केसीको जीवन रक्षा गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अपील गरेको छ । कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले विज्ञप्ति जारी गर्दै डा. केसीका मागहरु तुरुन्त कार्यान्वयन गरेर उनको जिवन रक्षा गर्न अपिल गरेका हुन् ।
कांग्रेसद्वारा जारी विज्ञप्तीमा, 'वार्ता टोली गठन गरेर डा. केसीसँग इमान्दार वार्ता र सार्थक कार्यान्वयनका साथ प्रस्तुत हुन' ओलीलाई आग्रह गरिएको छ । त्यस्तै, प्रधानमन्त्रीको अग्रसरता ०७५ साउन १० गते सरकारले गरेको सम्झौता उल्लंघन नभएको भए अहिलेको परिस्थिति नआउने कांग्रेसले बताएको छ ।
‘डा. केसीको यो अनशनको समयमा ‘बिराएको बाटोबाट ठिक बाटोमा आउन’ संघीय सरकारलाई नेपाली कांग्रेस हार्दिक अपील गर्दछ ।’ विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
यसबाहेक, जबरजस्ती डा. केसीलाई ट्रमा सेन्टरमा लैजानुले सरकारको अविवेकी र अनुदार चरित्र देखाएको कांग्र्रेसले स्पष्ट पारेको छ । जुम्लामा पुगेर डा. केसीले २९ भदौमा सत्याग्राह सुरु गरेका थिए । अहिले उनी त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा अनसनरत छन् ।
डा. गाेविन्द केसीलाई काठमाडौँ पठाइयो, सत्याग्रहबारे दिए यस्ताे जानकारी
डा. गोविन्द केसी नेपालगन्जमै रोकिए
शिक्षण जान्छु भन्दा जबर्जस्ती ट्रमा सेन्टर लगियो, के होला डा. केसीको स्वास्थ्य ?
डाक्टर गोविन्द केसीलाई ट्रमा सेन्टरबाट निकालियो
अनसनरत डाक्टर गाेविन्द केसीकाे मागमा नेविसंघकाे ऐक्यवद्धता
अनसनरत डाक्टर केसीलाई कांग्रेसका नेताहरुको साथ
शनिवार, आश्विन १० २०७७०५:०८:५६